Nilaza indray ny praiminisitra Mahafaly Olivier ny zoma 15 desambra lasa teo fa ho tapitra hatreo izany. Inona no fepetra tokony horaisina raha tsy tanteraka izany, izay midika fa fampanantenana poakaty sy tsy fanajana vahoaka ankitsirano ? Any ivelany dia mahatsapa tena mametra-pialana ny tompon’andraikitra tsy nahefa ny andraikiny. Eto amintsika kosa mifampiaro ny mpitondra, ka na efa hita izao aza fa olona manao ny tsy mety dia harovana, izay midika ho fanomezan-drariny sy fanomezana vahana azy hamotika ny firenena. Tsy mba hisy eto Madagasikara mihitsy ve ny kolontsain’ny asa sy ny fahavitan-javatra ka rehefa hita fa tsy mahavita azy dia manaja tena ka mametra-pialana ? Ny vahoaka etsy an-daniny efa tsy voafehin’izany lalàna izany intsony, fa samy manao izay tian-katao. Tsy mba misy intsony ny finiavana hanaja lamina ka rehefa mikorontana sy rotiky ny tsy fikorontanana ny fiarahamonina dia any amin’ny mpitondra ihany no ailika ny rihatra rehetra. Tsy ny mpitondra mihitsy, ohatra, no nanary fako eraky ny tanàna na tsy nanaja ny drafi-panajariana ny tanàn-dehibe, ka mahatsentsina ny tatatra amin’ny fotoam-pahavaratra, ka mahatonga ny toerana maro ho traboina. Ilay finiavana hivoatra mihitsy no tsy misy fa samy haetrin’ny foto-pisainana isika, ka lany andro mifanome tsiny lava eto.